Nkịta na ụlọ nke onwe: ụdị ụdị ịhọrọ? - Akụkọ - 2020
Nkịta na ụlọ nke onwe: ụdị ụdị ịhọrọ?
Ndị nwe dachas na nso nso ma ọ bụ mgbe e mesịrị chee echiche banyere otu esi enweta enyi anọ.
Otú ọ dị, ọ dị mma ịmara na ọ bụghị nkịta ọ bụla ga-enwe ike ibi ndụ dị jụụ ná mpụga obodo ahụ, ya mere, ọ dị mkpa iburu ibu ọrụ ịhọrọ ụdị ahụ, na iburu n'uche ihe ndị dị na anụ ahụ.
Nke mbụ, kpebie ihe mere i ji ezube inwe nkịta. Ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ọ na-anọ naanị n'ime ụlọ ma na-aga n'èzí ma na-agba ọsọ n'elu ahịhịa ma na-eku ikuku ume, mgbe ahụ na nke a, ị nwere ike ịhọrọ ụdị ọ bụla dị mma maka ibi n'ime ụlọ.
Otú ọ dị, ọtụtụ ndị nwe ụlọ na-enweta anụ ụlọ maka iji chebe ókèala ahụ, ma, ya mere, debe ha n'ime ụlọ ọrụ ahụ, na-ahapụ ha mgbe ụfọdụ. Nke a bụ ebe ihe isi ike na-amalite, dịka ọ bụghị ụdị nkịta ọ bụla nwere ike ịnọ n'ọnọdụ dị mma n'ọnọdụ dị otú ahụ.
Maka ozi gị! Ka ọ dị ugbu a, e nwere ihe karịrị narị anọ, ọtụtụ n'ime ha ka e guzobere maka ihe karịrị otu narị afọ, nhọrọ nke ndị mmadụ n'otu n'otu weere ọnọdụ dịka nkeji nkeji. Ya mere, dị ka ha na-ekwu, ị pụghị ịkụda mkpụrụ ndụ ihe nketa na mkpịsị aka gị. Dịka ọmụmaatụ, o yighị, onye nnọchianya nke ụdị ịchụ nta ga-abụ ihe na-adịghị amasị ndị dị ndụ.
Nkịta iji chebe ụlọ nke aka ya
Ị na-ebi n'èzí obodo ahụ n'afọ niile ma ghara ịmasị ndị ọbịa a na-akpọghị? Achọrọ ka obi dị gị mma? Enyi enyi anọ nke buru ibu, dịka ọmụmaatụ, nche na ọrụ, ga-abụ onye nche na onye na-echebe gị.
Tụkwasị na nke ahụ, a ga-akwụ ụgwọ nlezianya n'anụ ọhịa ndị ọzụzụ atụrụ, bụ nke na-anagidekwa ọrụ onye nche ahụ, n'ihi na n'oge mbụ ha na-eri nri iji kpuchido anụ ụlọ si anụ ọhịa.
Ya mere, maka ihe eji eme ka ọ bụrụ ihe dị mma:
Alabai (Central Asia Shepherd Dog);
Onye agha Russia;
Onye isi nkata, German, Eastern European Shepherd.
Ụdị ndị a dị nnọọ ukwuu, ya mere, onye ọhụụ ahụ kwesịrị ịdị sara mbara nke na pet nwere ike ịgbatị ya ma kwaga. A chọrọ ụlọ ntu dị mma ma dị mma, n'ihi na anụ ahụ ga-ebi ebe ahụ n'afọ niile. Ya mere, ọ bụrụ na ị họọrọ nnukwu nkịta, mgbe ahụ na-elekọta nkasi obi tupu oge eruo. Ka oge na-aga, ọ ga-abụrụ gị ọ bụghị naanị onye nche, kamakwa ezigbo enyi gị.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-ahọrọ ụlọ ntu, jide n'aka na ị ga-atụle nha anụmanụ ahụ. Nkịta dị n'ime ya ga-eguzo ọtọ na-edina ala, na-agbatị eriri ya niile.
Ekwesiri ighota na maka nchebe nke mpaghara ndi ozo, obere anu ulo nwere ike di nma, dika ima atu:
Otú ọ dị, ndị a enweghị oke ntutu (karịsịa Dobermans), n'ihi ya, n'oge oyi, ha nwere ike inwe obi iru ala. Iji dozie nsogbu a, ọ dị mkpa iji wuo ụlọ nche ma ọ bụ kwe ka nkịta rahụ n'ụlọ.
Anu ulo nke umu anumanu ndi nwere ike igosi oru nke onye nche di ike, ma oburu na emeghi ha nke oma, ha puru imebi onye nwe ha. Iji zere ọnọdụ ndị dị otú ahụ na-abụghị nke a, ọ dị mkpa iji wuo nkịta mmekọrịta dị mma, ya bụ, iji mee ka ọ zụlite ya n'ụzọ zuru oke ma mezue nkuzi ọzụzụ n'okpuru nduzi nke canine nwere ahụmahụ.
Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị bụ nkịta nke ga-enye ụda olu ka ị bịaruo ụlọ onye ala ọzọ ma jiri ụjọ na-atụ egwu ndị si ná mpụga, wee họrọ Newfoundland, St. Bernard ma ọ bụ Bernese Mountain Dog. Ndị enyi nkịta a bụ nnukwu ma nwee ezigbo enyi n'ebe ndị mmadụ nọ, n'ihi ya, ha agaghị enwe ike imerụ onye ọ bụla.
Naanị ihe ha nwere ike ime ka onye ọ bụla na-aga n'ụlọ gị bụ ịkụtu ya. Otú ọ dị, ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ndị na-amaghị ihe na-agbalị ịbanye n'ókèala gị mgbe ọ nụchara ala dị ala ma hụ oke nche gị.
Ezinụlọ ndị nwere ụmụaka pụkwara ịmalite nkịta nke ụdị a: ndị dị mma a na-ahụ anya agaghị emerụ nwatakịrị ahụ, ọ bụrụgodị na ọdụ, ntị ma ọ bụ nkwarụ adọkapụ ha. Otú ọ dị, jide n'aka na gị na ụmụ gị na-ekwurịta okwu ma kọwaa na nke a bụ ihe na-agaghị ekwe omume.
Ọ bụrụ na ịmalite obere anụ dịka enyi, ọ bụghị onye nche, mgbe ahụ mgbe ị na-ahọrọ, ṅaa ntị na parameters dị ka ihu na nha.
Nkume ndị a dị mma maka ịgagharị n'ọhịa n'ọhịa, n'ọdọ mmiri ma ọ bụ n'ime ụlọ ezumike dị ụsọ.:
Aussia (Onye Ọzụzụ Atụrụ nke Australia),
Ndị enyi enyi anọ a nwere mmasị iji oge ha na mmadụ nọrọ - ọ dị gị mkpa ịga na igwu egwu ha ruo ogologo oge. Ọ bụrụ na a na-ahapụkarị ha naanị ha, mgbe ahụ, site n'enyeghị ha nkụ, ha nwere ike ịkwanye ụlọ dị n'ụlọ, na-egwu ala n'okpuru ngere na ihe ọjọọ ndị ọzọ.
Okwesiri iburu n'obi na nani ndi Huskies, ndi ozo na ndi Samoides (ndi nnochi nkita nke ugwu) na-ebi ndu n'ariri na oyi. Ụdị ndị ọzọ dị na listi ahụ enweghị uwe dị oke mkpa na undercoat ma ghara ịdị ogologo oge oyi n'oge. Ya mere, n'oge a, a ghaghị idebe ha n'ụlọ. Buru nke a n'uche mgbe ị na-ahọrọ anụ ụlọ.
Maka ndị na-achọ ịchụ nta n'ọhịa, nakwa ndị bi n'oge okpomọkụ bụ ndị na-enweghị ubi ma ọ bụ ogige na ala ha ma ghara ime atụmatụ ka nkịta ahụ si n'ókèala ahụ, anụ ọhịa ịchụ nta (dachshunds, huskies, greyhounds, wdg) dị mma. Ma ọ bụghị ya, ịkwesịrị ịkwadebe maka akwa perekannymi, ebe a na-azọ ụkwụ na mkpesa ndị agbata obi banyere ọkụkọ na rabbit.
Ndị na-adịghị eme atụmatụ ichebe ụlọ nke nnukwu anụmanụ, ma ọ bụ ndị bi n'oge okpomọkụ nke na-adịghị ebi n'èzí obodo ahụ na-adịgide adịgide, ma na-aga ebe ahụ site na njem ụgbọelu, obere nkịta ga-eme:
ndị ọkà mmụta sayensị,
cavalier eze charles spaniels
Dị ka o kwesịrị ịdị, nke a abụghị ndepụta zuru ezu nke nkịta niile nwere ike ịnọnyere gị n'ụlọ ezinaụlọ. Na mgbakwunye, enwekwara ọbụbụ ọnụ - echefula banyere ha, n'ihi na ha onwe ha kwa, nwere ike ịghọ ezigbo ndị enyi gị.